၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလတွင်ကင်ညာမှကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်တစ် ဦး မှာလိုက်သည်2ပြောင်းဖူးကြိတ်ခွဲစက်ကိုသတ်မှတ်သည်။ မိမိလိုအပ်ချက်များအရ ,သူကဒီပြောင်းဖူးစက်ကိုစမ်းသပ်ချင်တယ်၊ သူ့ရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်။ ပြောင်းဖူးဟာအာဖရိကမှာအရေးပါတဲ့သီးနှံပဲဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ ,သူသည်ဤပြောင်းဖူးကြိတ်ခွဲစက်ကိုကင်ညာနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင်ရောင်းချလိုသည်။ သူ၏အီးမေးလ်တွင်အာဖရိက၌ပြောင်းဖူးများစွာကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ .
ပြောင်းဖူးသည်အာဖရိကလယ်ကွင်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စိုက်ပျိုးသောအရေးကြီးဆုံးသောသီးနှံပင်ဖြစ်သည်. ပြောင်းဖူးတစ်မျိုးတည်းကိုသာနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်သည်. အကြောင်းကိုရှိပါတယ် 50 ကမ္ဘာပေါ်မှာပြောင်းဖူးမျိုး,သူတို့မှာမတူညီတဲ့အရောင်တွေရှိတယ်, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဘောဇဉ်ပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစား. ဒါပေမယ့်အဖြူနှင့်အဝါရောင်ပြောင်းဖူးအသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်. အဖြူနှင့်အဝါရောင်မျိုးများကိုအာဖရိကလူမျိုးများကပိုနှစ်သက်ကြသည်။ ချိုသည်ဗီတာမင်အေကြွယ်ဝသည်, C နှင့် E, ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသတ္တုဓာတ်, နှင့်ဆံ့ 9% ပရိုတိန်း. ၄ င်းတို့သည်အစားအစာဖိုက်ဘာနှင့်ကယ်လိုရီပေါများကြွယ်ဝပြီးအာဖရိကအတွက်စွမ်းအင်ကောင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ပြောင်းဖူး၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်အစားအစာနှင့်အစားအစာမဟုတ်သောထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပြောင်းဖူးစေ့ကိုလူ့အစားအစာနှင့်ပြောင်းဖူးအညှာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ,အရွက်ကိုတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်.
အာဖရိကမှာ ,အချို့လူများကနံနက်စာစားသည်ဖြစ်စေပြောင်းဖူးမှတစ်နေ့သုံးကြိမ်စားသည်, အာဖရိကတွင်နေ့လည်စာသို့မဟုတ်ညစာ, ပြောင်းဖူးပန်းကန်နှင့်အတူလိုက်ပါရန်ရှိပါတယ်, သို့မဟုတ် it.corn မုန့်ညက်အစားအစာ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုဖွဲ့စည်းရန်အများဆုံးအာဖရိကနိုင်ငံအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောချက်ပြုတ်နည်းလမ်းရှိပါတယ် .
သင်ဘယ်မှာရှိနေသလဲ ,သင်သည်အာဖရိက၌ပြောင်းဖူးမုန့်ညက်ကိုမတူညီသောအမည်ဖြင့်ခေါ်ဆိုနိုင်သည် ,သူတို့ကအဲဒါကို Sadza.Ghana လို့ခေါ်ပါတယ်။ Banku (သို့) Kenkey.Ugali (သို့) fufu လို့ခေါ်တဲ့အာဖရိကအရှေ့ပိုင်းမှာပြောင်းဖူးအစားအစာအတွက်ဘုံနာမည်ဖြစ်တယ်။ ,ထိုကဲ့သို့သောမာလီအဖြစ်,သွားရန်,ဘီနင်စသည်တို့ .Nigeria ကို Ogi (သို့) Akamu ဟုခေါ်သည်. သင်သည်ပြောင်းဖူးအစားအစာပြုလုပ်ရန်အတွက်ဤအာဖရိကနိုင်ငံအများစုတွင်မြေ corn ဇာပြောင်းဖူးမှုန့်ကိုဝယ်ယူနိုင်သည်။ အာဖရိကတွင်ပြောင်းဖူးအစာစားရန်နည်းလမ်းရာပေါင်းများစွာရှိသည်။.
အာဖရိကနိုင်ငံမှာပြောင်းဖူးတွေဘယ်လိုချက်ရမလဲ ,cob ဆီမှပြောင်းနှင့်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုသူတို့လိုအပ်သည်။ ကင်ညာနိုင်ငံမှဖောက်သည်များအနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုယခင်ကလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်,ဒါက Mach အလုပ်သမားကိုယူရုံတင်မကဘဲအချိန်ဖြုန်းခြင်းလည်းပါဘဲ။ လယ်သမားကဒီစိုက်ခင်းကိုအချိန်များစွာကုန်လွန်စေတယ်။ ,အီးမေးလ်နှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအားဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုပြီးနောက် ,သူဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်2Kenya.we အတွက်ပြောင်းဖူးခွံစက်ကိုတပ်ဆင်လိုက်သည်2ပြောင်းအခွံခြွေစက်ကို Mombasa ဆိပ်ကမ်းသို့သတ်မှတ်သည်,ကင်ညာ . သူကအဲဒီမှာစက်ကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ် .it ကင်ညာအတွက်ပြောင်းဖူး peeler ခြွေလှေ့စက်ထောက်ပံ့ဖို့ဝမ်းသာပါတယ်။.